Soo Saaraha Shaxda Ugu Fiican Iyo Warshad | Medo
MEDO ahaan, miisasku had iyo jeer waa xiddig ifaya. Waa wehelka ugufiican sofasyada MEDO. Dhamaan iibsadayaashu waxay rabaan mid maadaama ay waxtar leedahay oo la awoodi karo. Miisasku waxay ku darayaan boos dheeraad ah adiga. Waxay sidoo kale u keentaa dareen qaab ah fadhigaaga fadhiga. Waxay sidoo kale noqon kartaa waxyaabaha xayeysiinta ugu fiican ama hadiyadda xilliga iibka.
Miis ayaa ah aragtida ugu horreysa ee qalabka guryaha. miisaska waa lagu dari karaa meel kasta oo guriga ka mid ah waana mid aan dhammaad lahayn oo lala qabsan karo.
Miisaska sidoo kale waxay isku daraan naqshad jilicsan iyo utility. Adoo adeegsanaya mashiinka horumarsan iyo qalabka tayada leh, waxaa laguu xaqiijin karaa tayada miisaska.
Dabeecad Cusub oo Guri
Farshaxanka talyaaniga ugu yar
Adoo xoogga saaraya quruxda adoo fiiro gaar ah u leh raaxada
Xulashada maqaarka dhabta ah ee lakabka koowaad
Lugaha birta kaarboonku waxay muujinayaan raaxo fudud iyo qurux
Isku-dhafan oo raaxo leh, farshaxan iyo qiimo!
"Minimalist" wuxuu ku socdaa isbeddel
Nolosha ugu yar, Meesha ugu yar, Dhismaha ugu yar ...
"Minimalist" wuxuu ka muuqanayaa warshado iyo qaab nololeed aad u badan
Qalabka guryaha ee loo yaqaan 'MEDO minimalist' wuxuu meesha ka saarayaa dhammaan howlaha aan loo baahnayn iyo khadadka alaabada ee soo noqnoqda, si loo dhiso jawi dabiici ah, fudud oo nasasho leh.
Maskaxdaada iyo jidhkaaguba way xorayn doonaan inta ugu sarraysa.
Miiska Casriga ah ee Wareega Wareega Casriga ah
Waxay u qaadataa marmar Talyaani ah sida miiska dushiisa iyo birta lagu duuduubay maqaarka khafiifka ah ee caymiska.
Miiska kafeega marmarka ayaa caan ku ah suuqa si ay uhesho dabiiciyan dabiici ah, kuleylka u adkaysta, iyo waxqabadka u adkeysiga xoqida.
Sidoo kale waa wax badan oo qaab-dhismeedka gudaha ah, xulasho ku habboon meelaha kala duwan.
Shaxda Xarunta Qolka Nolosha Shaxda Xarunta Oval Stone
Miisaska qaxwaha waxay qaataan naqshadeynta lugaha birta adag, oo si hufan u qaadi kara cuf-isjiidadka badan ee ka yimaada bannaanka.
Dusha sare ee dhagaxa raaxada leh waa qalab aad u fiican oo adag oo adag. Cidhifka kore waa bir sifiican loo shubay oo duubaysa kana ilaalinaysa dhagaxa.
Jadwalka Xarunta Maqaarka Haragga Koorsada Koowaad ee Talyaaniga
Dusha sare, oo la heli karo dhamaadka soo socda marmar, oo leh lugta kaarboon lugta ah oo lagu buuxiyo lacquer. Qaabka uu kujiro maqaarka salka ah, qaab dhismeedka guud ee kore wuxuu kujiraa salka marka majiraan wax qaab ah.Sidaa darteed waxay u egtahay qaab aad u qaali ah oo miiska dhexe ah
Miiska Xarunta Minimalist ee Leather Saddle
Qeybta hoose ee malabka malabka MDF oo leh alwaax qoryo dambas ah oo lagu qiijiyay laguna duubay maqaar salka laga soo dhoofiyay.
Lugaha Birta, dhameystirka-nikkel-dahabka, iyo duulaanka difaaca.
Shaxda Cuntada Marble Minimalist
Miiska jirku wuxuu ka samaysan yahay bir oo wuxuu ku duudduubanyahay maqaar khafiif ah oo loo yaqaan preminium oo ay weheliso lugta salka hoose ee birta ah ee la safeeyey. Qalabka desktop kala duwan ayaa la heli karaa: marmar qiiqa, midabka dhalaalaya dusha sare ee dahaadhka biyaha aan lahayn. Qaabdhismeedka taxaddarka leh iyo naqshadaynta shaqadu waxay abuuraan qaab hagaagsan.
Jadwalka Cuntada yar ee Minimalist
Iyada oo leh marmar tayo sare leh ama alwaax adag oo lagu sharaxay miiska dusha sare ee qafiifka ah, miiska cuntada ayaa la dhihi karaa waa halyeeyada ugu weyn ee guriga, kaas oo buuxin kara baahiyaha iswaafajinta alaabada kala duwan.
Shaxda Cunnada Casriga ah
Waxaa lagu gartaa dahab dahab bir ah iyo lugta birta madow. Miiska miisaanka dhagaxa ah waxaa dhiirrigeliya cirka xiddigta leh ee xagaaga: wuxuu ka kooban yahay si gaar ah loo sameeyey aalladda cimriga dheer leh iyo noocyo kala duwan oo ah marmar tayo sare leh, oo sameysmaya isku dhaf gaar ah oo ah maaddado marmar waaweyn oo baaxad leh, oo soo bandhigi kara qaansoroobaad -ila midabbo.
Miiska Qolka Cunnada Minimalist
Iyada oo marmar ama alwaax adag lagu qurxiyay miiska dusha sare ee qalooca, iyadoo la isticmaalayo qalab tayo sare leh iyo walxaha dusha sare leh, miiska cuntada ayaa la dhihi karaa waa halyeeyada ugu weyn ee guriga, kaas oo buuxin kara baahiyaha iswaafajinta alaabada kala duwan.
MEDO Minimalism Style Furniture Farshaxanka Miiska Soo Saaraha
Waxaan soo saareynay miisas kafee ah oo tayo leh waxaanan sameynay nidaam QC hufan oo lagu hubiyo dhinac kasta oo ka mid ah alaabta guriga. Khibraddeenna iyo geeddi-socodkeennu waxay noo oggolaanayaan inaan ku siino moodello tayo sare leh iyo miisaska miiska qaxwada caamka ah qiime jaban.
Waxaad ku qancin kartaa dhadhammo badan oo naqshad leh qaabkeenna joogtada ah ee sii kordhaya ee miisaska qaxwada jumlada ah.
Miisaska Marmar waxay ku yimaadaan dusha sare ee marmar cad. Waxay isku daraysaa curiyaha marmarka dabiiciga ah iyo dambas Ameerika si wanaagsan u fiican. Waa mid ka mid ah miisaska kafeega dusha sare lagu iibiyo ee kulul. Macaamiishayadu badanaa waxay u isticmaalaan sidii miis dhinaca fadhiga ah oo ku habboon qaabab kala duwan oo kala duwan.
Miisaska qaxwada yar ee wareega ee leh naqshad gaar ah. Waxay uga muuqataa suuqa qaabeynta qaabdhismeedkeeda iyo isku dhafka agabyada kala duwan iyo midabada. waxay kuu keenaysaa saameyn midaynaysa booskaaga.
Miisaska dhinaceeda, waa miis yar oo laba jibbaaran oo kala sooca geeskiisa iyo lugaha dahabka ah Miiska miiska waxaa ku yaal dhagax madow oo dahab isku qasan, oo ay weheliso lugta biraha dahabka ah, naqshaddu waxay soo bandhigaysaa jawi casri ah. Waa noocyo badan
Miisaska qaxwada casriga ah.
Miiska ugu weyn ee qaxwaha wuxuu kujiraa Veneered MDF qayb wuxuu ku darayaa qaabab badan. Saldhiggu wuxuu kujiraa birta kaarboonka adag sidaa darteed waxay noqon kartaa mid aad u xoogan isla mar ahaantaana aad u jilicsan.
Miisaska cuntada ee MEDO Minimalism Style
Ma u baahan tahay miisaska cuntada lagu cuno? Aynu noqonno ishaada miisaska tayada caadiga ah ee ku habboon barta qiimahaaga. Iyada oo ay ka go'an tahay abuurista miisas adag oo casri ah oo casri ah, kooxdayada qaabeynta ayaa si joogto ah u cusbooneysiiya naqshadaheena si ay ugu habboonaadaan dalabaadka ugu dambeeyay ee suuqa.
Khadkeenna miisaska cuntada marmarka, miisaska cuntada lagu dheereeyo, iyo miisaska cuntada lagu gado waa kuwa soo saaraha miisaska cunnadayada.
Miisaska cuntada oo leh kuraas 6 ilaa 8 qof ah. Waa miis casri ah oo naqshadaysan oo heer sare ah oo dusha sare leh iyo salka. Miiska dushiisa wuxuu noqon karaa marmar dabiici ah ama MDF oo leh dhammayn geedka geedka. Halka lugaha ay yihiin naxaas dhalaalaya oo lagu duuduubay maqaar salka.
Waxaan bixinnaa 3 cabir oo loogu talagalay baahida meelo kala duwan. Ikhtiyaarrada gaarka ah ayaa sidoo kale loo heli karaa amarrada badan.
Miiska wareega ee wareega wuxuu la yimaadaa lugaha birta ah iyo laba lakab oo sare oo alwaax ah. Cabbirrada, qalabka iyo midabada ayaa loo habeyn karaa si loo daboolo baahiyaha kala duwan.
Shaxda Cunnada oo Tayo Sare Leh
Naqshadeynta waa mid qurxoon oo qurux badan. Waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay naqshad heer sare ah oo ka tarjumeysa qaab nololeed cusub.
Qeyb weyn oo adag oo dhuuban dhoobada dhoobada ah oo ku fadhiya afar lugood oo jilicsan laakiin xoog leh. Qurxin kale la'aanteed, waxay ka dhex muuqataa hawdka miisaska cuntada lagu iibiyo ee suuqa ku yaal. Waxay si fiican uga caawineysaa ku habboon qaabab badan oo kala duwan oo gudaha ah.
Shaxda Xarunta Farsamada Casriga ah
Sawir Faahfaahinta Cabirka (L * W * H)
Shaxda Xarunta 1200 * 800 * 325mm 600 * 600 * 445 mm
Qaabka: Habka Minimalism
Waxyaabaha Marmar macmal ah, Maqaar Grey Saddle Dark
Lugta Cunitaanka Lugta Birta + Leather Saddel
Shaxda Xarunta Ø1200 * 390mm Ø800 * 460mm
Waxyaabaha Bir dahaadh ah oo dahab ah, pizza marmar dabiici ah oo cawl ah
Lugta Cunitaanka Lugaha Birta ah
Shaxda Xarunta 1000 * 1000 * 350mm 760 * 760 * 450 mm
Waxyaabaha Leather Saddle Premium Steel Black steel, Oak
Shaxda Xarunta 1300 * 780 * 400mm
Waxyaabaha Muraayad sigaar cabbin, 304 titanium bir birta ah oo dahaadhan
Jadwalka Cunnada Alaabada Casriga ah
Miiska cuntada Ø130 * 750 mm Ø150 * 750mm
Waxyaabaha Walnut laga soo dhoofiyo / Marmar dabiici ah
Miiska cuntada 1630 * 800 * 760 mm
Miiska cuntada Ø1200 * 760 mm
Waxyaabaha Steel ， Premium maqaar Saddle ， Walnunt Veneer laga keenay
Miiska cuntada 1790 * 1100 * 745mm
Waxyaabaha Marmar Cad
Xiga: Golaha wasiirada